Ihe ngosi nke mgbatị-pvc egwuregwu egwuregwu-News-Topflor China amachi
Echiche:46 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-01-26 Mmalite: Saịtị
Site na mmụba na-aga n'ihu nke mmata ahụ ike ndị mmadụ, ọtụtụ mmadụ na-esonye na otu ahụike, mgbatị ahụ abụrụla ebe ndị mmadụ na-ewu ewu. Onye editọ ahụ nwekwara echiche nke ị ga-aga maka klaasị ahụike site n'oge ruo n'oge, mana ọ na-atụ egwu na ọ gaghị enwe ike ịnọgidesi ike, ma ọ bụ na ọ nweghị ụzọ ziri ezi iji nweta mmetụta achọrọ na ọ mebeghị mkpebi . M na-atụkwa egwu ịhụ onye nchịkwa nwere ahụ dị mma na-abịakwute gị ka gị na ya nwee mgbatị ahụ, n'ikpeazụ, ọ malitere ire gị ọmụmụ gị ozugbo mkparịta ụka ahụ gbanwere. Echekwara m banyere ịgbada ala na obodo kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na m chọrọ ịmega ahụ, gịnị kpatara m ga-eji mefu ego ahụ. Eziokwu egosila na m adighi mma maka ahụike. Oge ọ bụla m jụrụ ịpụ n’echiche na ọ dị oke ọkụ na udu mmiri.
Hụ ụmụ obere ụmụ nwoke na ụmụnne ndị nwanyị ahụ na-arụ ọrụ mgbatị ahụ bụ ezigbo anyaụfụ. Enwere m ike ịnwe ọnụ ọgụgụ ahụ ma ọ bụrụ na m siri ọnwụ na m ga-arụ ọrụ. Ma, mgbe ha hụrụ ndị enyi m na-arụ ọrụ, ha nwere ara ọcha ọcha ha maka nri ehihie kwa ụbọchị, ike gwụrụ ha. Amaghim ihe kpatara m ji nwee ezi aru. Olee oke ahụhụ.
Ezigbo mgbatị nwere ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ dị mma, ndị nkuzi ọkachamara, yana ụdị ala eji eme dịkwa mkpa. Mgbe ị na-arụ ọrụ, gburugburu ebe mgbatị ahụ ga-eme ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala na ahụ iru ala, ma nwee ọ happyụ mgbe a na-emega ahụ, na-echezọ ihe mgbu kpatara ọnwụ ọnwụ; nsonaazụ ujo nke mgbatị ahụ ga-adị mma, iji zere ikpere mgbe mmega ahụ Mgbu, ụfụ ụkwụ na mgbaàmà ndị ọzọ, yabụ ụdị ala nwere ike izute ihe onye ọ bụla chọrọ?
Ulo egwuregwu pvc bu udiri egwuregwu nke emeputara nke oma maka ebe egwuregwu, nke dikwa nma maka uzo.
1. A na-eme pvc egwuregwu ala site na ịgbakwunye fillers, plasticizers, stabilizers, colorants na ihe ndị ọzọ inyeaka n'oge mmepụta usoro, na-emepụta na a na-aga n'ihu mpempe akwụkwọ nke mkpụrụ site a mkpuchi usoro ma ọ bụ a kalenda, extrusion ma ọ bụ extrusion usoro. N'ozuzu, a na-ejikọ ya na ihe dị iche iche dị iche iche, nke na-agbanwe agbanwe ma nwee mmetụta dị egwu na-adọrọ adọrọ, nke na-ebelata ohere nke mmerụ ahụ n'oge mmega ahụ.
2. ọgaranya agba nakawa etu esi: ịkwanyere egwuregwu n'ala nwere ezi n imomi osisi ọka, kapeeti ọka na ndị ọzọ na nka ụkpụrụ. Ahịrị ndị mara mma nwere ike rụọ ọrụ na-akasi obi, na-eme ka ndị mmadụ nwee echiche dị mma nke ọhụụ, ma na-eme ka ọnọdụ ahụ dị jụụ n'amaghị ama.
3. Nchedo na nchedo gburugburu ebe obibi. Ulo egwuregwu nke pvc nwere aha nke na-abughi formaldehyde, nke na-adighi egbu egbu, nke nwere mmekorita gburugburu ebe obibi, na imeghari. Na-eku ume n'oge na-adịghị anya n'oge mgbatị ahụ, ala ahụ jupụtara n'ime ụlọ ahụ dum, yabụ hụ na ala ahụ dị mma ma ghara ịdị na-egbu egbu. Iji
4. Ogige egwuregwu ịkwanyere pvc nwere njirimara nke enweghị agha, enweghị mgbawa, ọ dịghị atụ egwu mmiri, wdg, dị mfe ihicha, dị mfe ị kpuchie, dị mfe ilekọta na ihe ndị ọzọ.
5. Eyi-eguzogide na inogide: The ịkwanyere egwuregwu n'ala e mesoo na uv, nke nwere nnọọ ike na-eyi na-eguzogide arụmọrụ. Oge ndụ karịrị afọ iri.
6. Anti-ileghara: The ịkwanyere egwuregwu n'ala nwere ibu mgbochi ileghara arụmọrụ, onye ọrụ ụkwụ adịghị ileghara, na ụkwụ na-eche nnọọ ala. Otu mmiri dị, ọ na-eguzogide ọgwụ ọzọ, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị maka ịda n'oge mmega ahụ.
Ọ ka mma ịhọrọ ọkpụrụkpụ ma ọ bụ obere pvc egwuregwu flooring?